Landa uphinde ufake imiyalezo Ukulekelela APP IN PC (WINDOWS 7,8/10 NOMA MA
Alisa Okthoba 12, 2017 0 Amazwana
1 Imibiko Ukulekelela PC APP IN
1.0.0.1 Bangu 3 izindlela ukufaka lolu hlelo lokusebenza ku-Windows noma i-Mac yakho pc.
1.0.1 Nakhu ngezansi efakwe ohlwini.
1.0.2 Faka Imibiko Ukulekelela- Phendula Ngokushesha App PC nge Nox
Imibiko Ukulekelela PC APP IN
Usanda ukuzizwa ukhathele nasekubambeni amaningi imiyalezo izinhlelo zokusebenza udinga ukuba ume umdlalo wakho ukuze uphendule umuntu kuka udinga imiyalezo booster.
Nge Android imiyalezo booster lokusebenza ungakwazi kalula ukugxila kulokho yakho eniyenzayo ngoba kuyasiza ngempela ukuba baphendule kusuka isikrini ngaphandle kokucima noma umise umdlalo. Ungaba ikhiqize kakhudlwana nge imiyalezo booster lokusebenza imbangela ungakwazi ukugxila ngempela okwenzayo bese uphendula kusuka esikrinini efanayo. ngithole 10 Edume imiyalezo booster zokusebenza okwamanje.
Bangu 3 izindlela ukufaka lolu hlelo lokusebenza ku-Windows noma i-Mac yakho pc.
Nox lokusebenza umdlali
Lokhu konke kuyinto Android isofthiwe kudivayisi Emulator for pc.
BlueStacks kuyinto Emulator Android evumela ukuthi wena uqalise izinhlelo zokusebenza Android ku pc. Abanye onjiniyela Android ukusebenzisa lolu isofthiwe lapho bengakwazi ukuhlola lokusebenza kudivayisi yangempela nomunye emulators iphahlazeka. Lona ethandwa kakhulu software Android ukulingisa njengamanje.
Ukuze ekuqaleni udinga ukufaka BlueStacks ku pc yakho. Ungalanda it kusuka lapha.
Ngemva kwalokho kudingeka ukuqalisa BlueStacks kukhompyutha yakho.
Nakhu ngezansi efakwe ohlwini.
Uma BlueStacks yethulwa, ukuchofoza Izinhlelo zokusebenza Izinhlelo zami inkinobho Emulator
Cinga: Imibiko Ukulekelela lokusebenza
Uzobona search umphumela Imibiko Ukulekelela lokusebenza lwe nje uyifake
Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Google ukulanda izinhlelo zokusebenza kusukela ku-Google Play BlueStacks
Amacebo: Uma uhlangabezana Iyalayisha udaba software BlueStacks umane ufake Microsoft .net Framework isofthiwe PC yakho. Noma amazwana ngezansi inkinga yakho.
Ukusikisela: Futhi unga Landa uhlelo lokusebenza ifayela le-APK Imibiko Ukulekelela bese uyifake kwi BlueStacks Android Emulator uma ufuna.
nge android, ungakwazi kalula futhi ngokushesha phendula konke yakho izingxenyekazi zomphakathi wezindaba.
Ungalanda Imibiko Ukulekelela- Phendula Ngokushesha App 1.7.7 APK Downloadable e-PC yakho ukuyifaka ku Emulator PC yakho Android kamuva.
Download Imibiko Ukulekelela- ifayela App APK Phendula Ngokushesha
Faka Imibiko Ukulekelela- Phendula Ngokushesha App PC nge Nox
Landela lezi zinyathelo ngezansi:
Faka nox lokusebenza umdlali PC
Kuyinto Emulator Android, ngemuva kokufaka run Nox PC, futhi ngemvume ku-akhawunti yakwa-Google
Ithebhu isiseshi nokusesha i: Imibiko Ukulekelela- Phendula Ngokushesha App
Faka Imibiko Ukulekelela- Phendula Ngokushesha App Nox Emulator yakho
Uma ukufakwa sekuqediwe, uzokwazi ukudlala Imibiko Ukulekelela- Phendula Ngokushesha App ku-PC yakho
Uma usebenzisa Nox umdlali ufakile Imibiko Ukulekelela- Phendula Ngokushesha App e pc, kukhona inketho inikezwe ngaphakathi Emulator (Ctrl ++ iyona shortkey).
Ngakho uma unemibuzo noma ucabanga ukuthi kukhona okweqile nje zizwe ukhululekile ukushiya umbono wakho kumazwana ngezansi.
Izinhlelo ze-Android	engcono Pomodoro timer amawindi, Ukugxila booster khulula, Ukugxila Ukubuyekeza booster, Ukugxila thwebula Ariana Grande, Pomodoro khulula timer mac, Pomodoro khulula amawindi timer, utamatisi lokusebenza le-chrome, utamatisi amafasitela timer 10	Bookmark
Article Langaphambilini Landa uphinde ufake Ludo STAR : 2017 (NEW) IN PC (WINDOWS 7,8/10 NOMA MAC)
Article Landelayo Medieval neMpi Ukulwa Fantasy: Battle Amanxeba Android apk umdlalo. Medieval neMpi Ukulwa Fantasy: Battle izibazi khulula thwebula smartphone kanye amaphilisi